for all and for you .....
ချစ်သူအတွက် ရည်စူးပြီး ရေးဖြစ်သွားတဲ့ blogလေးပါ... ကျွန်တော်က လေ့လာဆဲ၊ သင်ယူဆဲ၊ မှတ်သားဆဲ၊ (ကျွန်တော့် ကောင်မလေးကိုလဲ ချစ်နေဆဲ...) မျှဝေခံစားပေးသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးပါ...
Valentine's Day အတွက် (5)
ခင်မင်မှုဖြင့် Tag ထားသော ပို့စ်လေးများ (4)
ချစ်သူသို့ ... (8)
Myanmar Times သတင်းစာ
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတာ မဟုတ်တဲ့ post တွေကို တတ်နိုင်သမျှ ဘယ်သူရေးတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြပေးပါတယ်။ ဖတ်မိတဲ့သူများအနေနဲ့ ဘယ်သူရေးတယ်ဆိုတာသိရင် ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျား။ အားနည်းချက်များရှိရင် နားလည်ခွင့်လွတ်ပေးကြပါလို့ ပြောပါရစေ။ လက်လှမ်းမှီသလောက် စုဆောင်းပြီး ဖော်ပြပေးထားပါတယ်... ကိုယ်တိုင်ရေးတွေက အနည်းငယ်ပဲပါပါတယ်...
လာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ...
Taunggyi - The Cherry Land
Posted by မိုးသောက်(ရှမ်းလေး) at 2:39 pm
Blog ကို လှည့်မကြည့်နိုင်လောက်အောင် အရမ်းဖိစီးတဲ့ Pressure တစ်ခု ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ နောက်ပိုင်းမှာ စိတ်ဓါတ်လဲပျက်၊ ဘာမှလဲ လုပ်ချင် ကိုင်ချင်စိတ်မရှိပဲ အချိန်တွေကို ဖြုန်းနေခဲ့မိတယ်။ အခုတော့ ဒါတွေဟာ အတိတ်မှာ ကျန်ခဲ့ပါပြီ။ စိတ်ကို အနိုင်ယူနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေနေပါပြီ။ နေတတ်အောင်လဲ နေနေပါပြီ။ အပြုံးတွေထဲမှာ အသက်ပါဖို့တော့ အချိန်ယူရဦးမယ်။ ဘယ်အရာကိုမှ လက်လျှော့အရှုံးပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ -ပြင်းထန်သော ဆန္ဒရှိသူသည် ဘယ်ကိစ္စမဆို မပြီးသည် မည်သည်မရှိ- တဲ့။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဗျာ။
အခုပြောချင်တာကတော့ မကြာခင်မှာ အင်တာနက်နဲ့ ဝေးရာနေရာကို သွားရပါတော့မယ်။ ဘဝရဲ့ လှေကားထစ်တစ်ခုကို ကျော်ဖြတ်ရပါတော့မယ်။ ဒါကြောင့် Blog ကို ဆက်လုပ်ဖို့ အခြေအနေမပေးတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ညီအစ်ကို မောင်နှမများအားလုံးကို နုတ်ဆက်တာပါ။ အစဉ်အမြဲ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့လဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Blog ရေးစဉ်ကာလက ဝင်ရောက်အားပေး ဖတ်ရှုခဲ့ကြတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ညီအစ်ကို မောင်နှမများအားလုံးနဲ့ ချစ်သူကိုလဲ အရမ်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘဝရဲ့ မှတ်တိုင်လေး တစ်ခုအနေနဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့လို့လဲ စိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်း ကြည်နူးနေရမှာပါ...။
Posted by မိုးသောက်(ရှမ်းလေး) at 10:15 am
ကျွန်တော် မောင်မိုးသောက်(ရှမ်းလေး) စာတမ်းတွေတင်၊ စာမေးပွဲတွေ ဖြေနေရပါသဖြင့် Blog စာမျက်နှာများ ပေါ်မှ ခတ္တခဏ ပျောက်နေပါဦးမယ် ခင်ဗျ... လာလည် အားပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း ညီအစ်ကို မောင်နှမများ အားလုံးကို တအားပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... ကိုယ့်ဆီကို လာလည်ပြီး ကိုယ်က ပြန်လိုက်မလည်နိုင်တဲ့ အတွက် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများကို တအားကို အားနာပါတယ်.... ဆက်ရန် ပို့စ်လေးကို အားချိန်ရှိတာနဲ့ ချက်ချင်း ဘာသာပြန်ပြီး တင်ပေးပါ့မယ်... Cbox မှာ နုတ်ဆက် အားပေးပြီး သတိတရနဲ့ မေးသွားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကို ဧည့်ဝတ် မကျေသလိုလဲ ခံစားနေရပါတယ်... အနော် မောင်ရှမ်းလေး စာမေးပွဲဆိုတဲ့ ကျောင်းသားတို့ရဲ့ ရန်သူတော်ကြီးကို ကျော်လွှားပြီးရင် နွေးထွေးဖော်ရွေတဲ့၊ ခံစားချက်တွေ ညီတူကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများရှိသော Online ပေါ်မှာ Blog ဆက်ရေးပါ့မယ်... အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ဖွယ် နေ့ရက်လေး ဖြစ်ပါစေ... :))
Posted by မိုးသောက်(ရှမ်းလေး) at 9:46 pm
အရမ်းအေးတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီည တစ်ညပေါ့။ လမ်းပေါ်မှာ လျှောက်သွားနေတဲ့ လူတွေကတော့ နွေးနွေးထွေးထွေး ဖြစ်အောင် အနွေးထည် အထူကြီးတွေ၊ လည်စည်းပုဝါ (မာဖလာ) တွေပတ်ပြီးတော့ သွားလာနေကြတယ်။ ဒီနေ့ တော်တော်ကို အေးတယ်။ ပြူတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကို ငေးနေမိတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ လူတွေက အစက် သေးသေးလေးတွေ လှုပ်ရှား နေသလိုပဲ။ ဟိုဘက် သွားလိုက် ဒီဘက် သွားလိုက်နဲ့လေ။ နွေးထွေးနေတဲ့ အခန်းထဲကနေ ကျွန်မ သူတို့ကို ကြည့်ပြီး သနားတောင် သနားလာတယ်။ သူတို့ ဒီအချိန်ထိ အိမ် မပြန်နိုင်ကြသေးပဲ ဘယ်တွေ သွားပြီး ဘာတွေ လုပ်နေပါလိမ့်နော်။ မနက်ထိများ လျှောက်သွား နေကြမလား မသိဘူး။
“အိမ် ပြန်ရတော့မယ်ဟေ့၊ ငါ့ဘဲဘဲလေး ခမျာ စောင့်နေရှာတော့မှာပဲ…”
နပ်စ်မလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရတယ်။ ဟုတ်သားပဲ။ အလုပ်ချိန် ပြီးတော့မှာပဲ။
“လုံးဝ မတရားဘူးဟာ။ ဒီလိုမျိုး ဗယ်လင်တိုင်းနေ့ မှာတောင် အိုဗာတိုင် (အချိန်ပို)က ဆင်းရသေးတယ်။”
“အမယ်… နင်ကမှ ကံကောင်းသေးတယ်။ တချို့ဆိုရင် စောင့်မယ့်သူ ဘယ်သူမှ မရှိရှာဘူးဟဲ့။”
“နင် ဒေါက်တာ စမ်းစမ်းထွဏ်း ကိုပြောတာလား?”
နားပါးလွန်းတဲ့ ကျွန်မကလဲ အဲဒီအသံတွေကို ကြားဖြစ်အောင် ကြားလိုက်သေးတယ်။
“နင် မှတ်မိတယ်မလား။ အရင်နှစ်က ဒီနေ့မှာလေ ဒေါက်တာစမ်းစမ်း အရမ်း သွေးပျက်ခဲ့တာလေ။”
“အေး… ငါသိတာပေါ့။ ဒေါက်တာစမ်းစမ်း အဲလိုမျိုး ဖြစ်တာ အရင်က တစ်ခါမှ မတွေ့ခဲ့ဖူးဘူးဟယ်။ သူသနားပါတယ်။ ”
သူတို့ ပြောနေတာ ကျွန်မ အကြောင်းပါလား။ အရင်နှစ်က အဖြစ်အပျက်တွေ…။
အင်း… သူတို့ပြောတာ မမှားပါဘူး။ အရင်နှစ်က ဒီနေ့မှာ ကျွန်မ အရမ်း သွေးပျက်ခဲ့ရတယ်။
“နင်ကလဲဟယ်…။ ဘယ်လို ပြောလိုက်တာလဲ။ ငါတော့ သူ့ကို အရမ်းသနားတာပဲ။ ငါ့ရည်းစားသာ ငါ့ မျက်စိရှေ့မှာ သေသွားတယ် ဆိုရင် ငါတော့ ရူးမှာပဲ။”
“တိုးတိုး ပြောဦးဟဲ့။ သူ ရှိနေသေးတယ်။ မပြန်သေးဘူး။ ကြားသွားပါဦးမယ်ဟယ်။”
သူတို့ နှစ်ယောက် အရမ်းကို နောက်ကျသွားပါပြီ။ ကန့်လန့်ကာ အကွယ်မှာ ရှိနေတဲ့ ကျွန်မက သူတို့ ပြောတာတွေကို အားလုံး ကြားပြီးသွားပါပြီ။
“ဒေါက်တာ.. ဒီမှာ ဘာလုပ် နေတာပါလဲရှင်။ ဘာများ လိုအပ်လို့လဲ မသိဘူးရှင့်။”
အဲဒီ အချိန်မှာ အခန်းထဲကို ဝင်လာတဲ့ တခြား နပ်စ်မလေး တစ်ယောက်က ကျွန်မကို မေးလိုက်တာပါ။
ကျွန်မ အကြောင်းပြောနေတဲ့ နပ်စ်မလေး နှစ်ယောက်ဟာ ကျွန်မ ရှိနေတာကို သိသွားလောက်ပြီ။ သူတို့တွေ ရှက်သွားလို့ မျက်နှာလေးတွေ နီရဲသွားတာပဲ။ ကျွန်မက ဒီအခန်းထဲမှာ ရှိနေကြောင်း သူတို့ကို အသိမပေးချင်ပါဘူး။ တိတ်တိတ်လေးပဲ ထွက်သွားချင်တာလေ။ အခုတော့ မမျှော်လင့်ပဲ သူတို့ သိသွားကြပြီ ထင်တယ်။
“အော်… ကျွန်မ အိမ်ပြန်မလို့ ပြင်ဆင်နေတာပါ။ အလုပ် ဆင်းတော့မယ်လေ။”
ကျွန်မ ဘာမှမသိ၊ မကြားသလို ဟန်ဆောင်လိုက်တယ်။
“ဒေါက်တာက အလုပ်ကို အရမ်း ကြိုးစားတာပဲ။ အခုက ဒေါက်တာ့ တာဝန်ချိန်တောင် ကျော်နေပြီ။ ဒေါက်တာရေ… ဟတ်ပီး ဗယ်လင်တိုင်းဒေးနော်…။”
ကျွန်မ ပြန်တော့မယ်ဆိုလို့ ခုနက ဝင်လာတဲ့ နပ်စ်မလေးက နုတ်ဆက်နေတာလေ။
ကျွန်မ ပြန်နုတ်ဆက် လိုက်တယ်။ ခုနက ကျွန်မအကြောင်း ပြောနေတဲ့ နပ်စ်မလေး နှစ်ယောက် ကတော့ သုတ်သုတ် သုတ်သုတ်နဲ့ အခန်းထဲက ထွက်သွားလေရဲ့။
အိမ်ပြန်ဖို့ အချိန်ရောက်လာပြီ။ ခုနက သူတို့ ပြောတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်မကို လာစောင့် ကြိုနေမယ့်သူ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး။ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အိမ်မှာ အစာတောင်းဖို့ စောင့်နေမယ့် ကျွန်မရဲ့ ကြောင်လေးက အိမ်ပေါက်ဝမှာ ကျွန်မကို ကြိုနေမှာ တော့ အသေအချာပါပဲ။
အိမ်ရောက်တော့ ကျွန်မကို စောင့်ကြိုနေတဲ့ ကြောင်လေး ပူစီကို မြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျွန်မ ပျော်ရွှင်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ပေါက်ဝရောက်လာတဲ့ ပူစီလေးရဲ့ ညှိုးငယ်နေတဲ့ မျက်ဝန်းအစုံကြောင့် သနားသွားခဲ့တယ်။ သူတော်တော် ဗိုက်ဆာနေပြီ ထင်ပါရဲ့။ ဘယ်လောက်ပဲ နာကျင် ဝမ်းနည်းနေပါစေ။ ကြောင်တွေက မငိုတတ်ဘူး။ အဲဒါ လူနဲ့ ကွာခြားချက်ပဲ။
“ပူစီလေး… လာ..လာ.. မှီမှီ… ဒီမှာ နွားနို့ လာသောက်၊ လာ… မသောက်ရင် ထုလိုက်မှာနော်။”
ပူစီလေးက မီးညောင်… လို့ အော်နေပါလေရော။ အဲဒီလို အော်တာက ကျွန်မရဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေကို မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောနေသယောင်ယောင်။ ပုန်ကန်ချင်တဲ့ မျက်လုံးအစုံနဲ့ ကျွန်မကို ကြည့်နေတယ်လေ။ အဲဒီလို ကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေ…..။ အို… သူ့ မျက်လုံးတွေပေါ့။ သူ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ တပုံစံထဲပါပဲ။ သူ့ကို သတိရသွားတဲ့ ကျွန်မရဲ့ စိတ်အစဉ်က ဟိုးအတိတ်ဆီကို လွင့်ပျံ့သွားလေရဲ့….
(ကြိုးစားပြီး ဘာသာ ပြန်ထားတာလေးပါ... ဆက်လက် ဖော်ပြသွားပါ့မယ်...)
Posted by မိုးသောက်(ရှမ်းလေး) at 9:08 pm
ရင်ထဲက သင်္ကြန် ဆိုတဲ့ အတိုင်းပါပဲ… တကယ်ပဲ ရင်ထဲမှာပဲ ရှိနေခဲ့တာလေ… အပြင်မှာ ပျော်ခွင့် မရခဲ့တာ ကြာပါပြီ… ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင်္ကြန်ဆိုရင် ပျော်တာပါပဲ… ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ပါဘူး၊ အားလုံး အားလုံးပဲ ပျော်ကြတာပါပဲ… ဟုတ်ပါတယ်နော်… ကလေးလူကြီး အားလုံး ပျော်ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ဟာ ကမ္ဘာမှာ ကျွန်တော်တို့ တစ်နိုင်ငံပဲ ရှိတယ်လေ… ဒီနှစ် အတောအတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သင်္ကြန်ဆိုရင် ရုံးပိတ်ရက်ရှည် ပိတ်ပေးတာလဲ အရမ်း ကောင်းပါတယ်… မိသားစုတွေ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဘုရားဖူး ထွက်နိုင်သလို၊ ဘုရားသွား ကျောင်းတက် လုပ်ဖို့လဲ အချိန်တွေ အများကြီး ရပါတယ်… ပြောရမယ်ဆိုရင် သင်္ကြန်မှာ ပျော်စရာ ကောင်းတာ၊ နှစ်သက်ဖွယ် ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု တွေကို တွေ့ရတာ၊ စုံလို့ပါပဲ… ပြောလို့တောင် မကုန်ပါဘူး… ကျွန်တော့ အတွေ့အကြုံလေး တစ်ခု ပြောပြချင်ပါတယ်… ကျွန်တော် ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံက ဒီနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသား ဆရာ၊ ဆရာမနဲ့ သူငယ်ချင်းများကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေ၊ ပွဲတော်တွေ အကြောင်း ပြောပြရင် သင်္ကြန်ကို အရမ်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်… စတုဒီသာ ကျွေးတယ်ဆိုတာ၊ လူကြီးသူမ တွေကို ခေါင်းလျှော် ရေချိုး ပြုစုပေးတယ် ဆိုတာ၊ နှစ်သစ်ကူးကို အတာ ရေလောင်းတယ် ဆိုတာတွေကို အရမ်း သဘောကျကြပါတယ်… နှစ်ဟောင်းက အညစ် အကြေးတွေကို သင်္ကြန်ရေက ဆေးကြော ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ယဉ်ကျေးမှုကို အရမ်း သဘောကျနေကြတယ်… အရမ်းကို idea ကောင်းတာပဲလို့ ပြောကြတယ်… ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို ရေလောင်း သွားကြတယ်လေ… ဟားဟား... ဒီနှစ် သင်္ကြန်တော့ ရေမစိုတော့ဘူးလို့ ထင်ထားတာ… စိုလိုက်တာမှ ရွှဲသွားတာပဲ…. (Blogger သယ်ရင်း မောင်နှမများလဲ လောင်းသွားကြလို့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရွှဲသွားသေးတယ်…) တကယ်ပါပဲ… ရင်ထဲက သင်္ကြန်လဲ အနဲနဲ့ အများတော့ ပျော်ခဲ့ပါတယ်… မြန်မာနိုင်ငံ ကိုတော့ အရမ်း သတိရတာပေါ့နော်… အဝေးရောက် မြန်မာများလဲ ပြန်ချင်ရှာ ကြမှာပဲလို့ တွေးမိပါတယ်… အေးဆေးပေါ့နော်… အခုတော့ ခဏ အောင့်ထား လိုက်ကြဦးပေါ့… ပြန်ရောက်ရင် ကဲလို့ရမှာပါ… ဟုတ်တယ်မလား….
(မထည်ဝါချိုရေ… tag ထားတာကြာပြီ… အခုမှ ရေးပေးတဲ့ အတွက် နောက်ကျသွားတဲ့ အတွက် ခွင့်လွတ် ပေးပါခင်ဗျာ… မအားတာနဲ့၊ နေမကောင်း ဖြစ်တာနဲ့၊ ခရီး ထွက်သွားတာနဲ့ အခုမှ ရေးဖြစ်လို့ပါ… blogger မောင်နှမချင်း ခင်လို့ ရေးပေးတာ… နောက်ကျလို့ ဆောရီးပါနော်… ပိတောက်ပန်း ပုံလေးကို Google ကနေ ရှာထားတာပါ...)
Labels: ခင်မင်မှုဖြင့် Tag ထားသော ပို့စ်လေးများ
Posted by မိုးသောက်(ရှမ်းလေး) at 3:21 pm
ကိုကြီးနဲ့ငယ်လေးက tag လိုက်ပြန်ပြီဗျို့….. ဘာအကြောင်းလဲ ဆိုတော့ မနက်ခင်းမှာ ဘယ်လို နိုးထလာသလဲတဲ့…. ဘယ်လို နိုးထလာသလဲ ဆိုတော့ ဒီလိုပါ… အိပ်ချင် မူးတူးနဲ့ နိုးလာတာပေါ့ဗျာ… ဟီးဟီး…. အလကားနောက်တာပါ… ဒီလိုပါ…. ကျွန်တော်က ကျောင်းတက်နေတာ ဆိုတော့ မနက် စောစော ထရပါတယ်… အရမ်း ဆိုးပါတယ်… ထချင်ဘူးဗျ… စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေက လွဲရင်ပေါ့နော်… ကျန်တဲ့ ရက်တွေမှာက ကျောင်းသွားဖို့ကို စောစောထရတာကိုး… နာရီ သံပတ်မြည်တဲ့ အချိန်ဆိုရင် နားထဲမှာ ဗုံးကွဲသလို ခံစားရရော… စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေမှာက ကျွန်တော်နဲ့ မဒီမိုးသောက်နဲ့ အွန်လိုင်းမှာ တွေ့ကြတယ်…. G-talk ပြောကြတယ်… အလွမ်း သယ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာ… အဟဲ… (သူက မြန်မာနိုင်ငံကနေ အွန်လိုင်း တက်ပါတယ်...) သူလာတဲ့ အချိန်က ကျွန်တော့ဆီမှာ မနက် စောစောပဲ ရှိသေးတယ်… ဒါပေမယ့် အဲဒီရက်တွေ မှာတော့ ဘယ်လောက် စောစော ကျွန်တော် နိုးနေတယ်… ထူးဆန်းတယ်နော်… မနက်ဆိုရင် စိတ်က အလိုလိုပဲ နိုးလာတာ… ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က အိပ်ချင်ယောင် ဆောင်နေတာ… ဘာလို့လဲဆိုတော့ မဒီမိုးသောက်က အာဘွားနဲ့ နှိုးတာကို ခံချင်လို့… အဟီး… (ကိုကြီးနဲ့ ငယ်လေးတို့လိုလေ… :P)
ဒါက ကျွန်တော် ဘယ်လို နိုးထလာလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးပါပဲ… အခု ကျွန်တော့် အမြင်လေးကို ပြောပြချင်လို့ပါ… ကိုကြီးနဲ့ငယ်လေးက tag လာတော့ ဘာကို စဉ်းစားမိလဲ ဆိုတာလေးပါ… နိုးထလာခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်… ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်ကပါ… လူတစ်ယောက်ဟာ မနက် စောစော ထသင့်ပါတယ်… ဒါ့အပြင် အိပ်ရေးလဲ ဝအောင် အိပ်သင့်ပါတယ်… စောစော ထနိုင်ဖို့ စောစော အိပ်သင့်တယ်လေ… စောစောထ၊ ကိုယ်လက် သန့်စင်၊ ပြီးတော့ အစား များများ စားပေး၊ ညနေစာ လျှော့စား… ဒါလေးတွေကို ပုံမှန်လေး လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် မနက်တိုင်း မနက်တိုင်း နိုးထလာတဲ့အခါ စိတ်လက် ကြည်လင်ပြီး ခေါင်းရှင်းရှင်းနဲ့ အလုပ်သွားတဲ့ သူတွေ အတွက်လဲ အလုပ်အတွက်၊ ကျောင်းတက်ရမယ့် သူတွေ အတွက်လဲ ကျောင်းစာအတွက် စသဖြင့်ပေါ့နော်၊ စိတ်ကြည် ခေါင်းကြည်နေရင် ဖိအား ကင်းကင်း စိတ်လက် ရှင်းရှင်းနဲ့ သွားလာ လှုပ်ရှား နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်… ကျွန်တော့် အမြင်လေးကို တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်…
(ကိုကြီးနဲ့ငယ်လေးရေ… ဒီပို့စ်လေးကို ခင်မင်မှု များစွာဖြင့် ရေးပေးပါတယ်နော… )
April Fool’s Day အကြောင်း
Posted by မိုးသောက်(ရှမ်းလေး) at 7:55 pm
April Fool’s Day ဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့ ပတ်သတ်သော သမိုင်းကြောင်းက တိတိကျကျ ရယ်လို့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခရစ် သက္ကရာဇ် ၁၅၈၂ခု ပြင်သစ်နိုင်ငံ နဝမမြောက် ချားလ်စ်ဘုရင် လက်ထက်မှာ ပြက္ခဒိန်ကို ပြောင်းလဲ လိုက်တာကနေ အစ ပြုတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ (မြန်မာလို အယူ ဆိုရင် သက္ကရာဇ် ဖြိုတယ်လို့ ခေါ်မယ် ထင်ပါတယ်။) ဘယ်လို ပြောင်းလဲ လိုက်သလဲ ဆိုတော့ မတ်လ (၂၅) ရက်နေ့ကနေ ဧပြီ (၁) ရက်နေ့အထိ (နှစ်သစ်ကူး ကာလ) ကို ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ကို ရွှေ့ပြောင်း လိုက်တာပါပဲ။
အဲဒီ ခေတ်ကာလက ဆက်သွယ်ရေး စနစ်တွေက ယနေ့ခေတ်လို မဟုတ်တော့ နှေးကွေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် တချို့သော လူများက ဒီလို အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားတာကို နှစ်အတော် ကြာမြင့်တဲ့အထိ သတိ မထားမိကြဘူး။ အဲဒီအချိန်ထိ တချို့သော အစွန်းရောက် လူများ၊ ဘုရင့် အမိန့်ကို ဖီဆန်ချင်ကြတဲ့ သူများကတော့ ဒီအပြောင်းအလဲကို လက်မခံခဲ့ဘူး။ နှစ်သစ်ကူးကို ဧပြီ (၁) ရက်နေ့မှာပဲ ကျင်းပဖို့ ဆန္ဒရှိကြတယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲကို လက်ခံကြတဲ့ သာမန် ပြည်သူ လူထု တွေကတော့ အစွန်းရောက်ပြီး လက်မခံ ဆန့်ကျင် ချင်ကြတဲ့ သူများကို “အရူးများ” လို့ လှောင်ပြောင် ခဲ့ကြတယ်။ ခေါ်ဝေါ် သမုတ်ခဲ့ကြတယ်။ စ စရာ နောက်စရာ အဖြစ်သာ မြင်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် အဲဒီ လူတွေဆီကို တကယ် မကျင်းပပေမယ့် ကျင်းပသယောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပါတီဖိတ်စာတွေ၊ ကျီစယ်ထားတဲ့ ဟာသတွေကို ဧပြီ (၁) ရက်နေ့မှာ ပို့ပေးပြီး အရူးလုပ်ထားတဲ့ စာတိုတွေ၊ စကားတွေနဲ့ စ နောက် ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီလို စနောက်ခဲ့ကြပြီး ရယ်မောခံ လူတစ်စုကို “poisson d’avril” ၊ “April fish” လို့ နောက်ပြောင် ခေါ်ဝေါ် ခဲ့ပြန်တယ်။ “April fish” ဆိုတာက နုံနုံအအ ငါးငယ်လေးတွေဟာ အလွယ်တကူ အဖမ်းခံ ရတတ်သလို အရူး လုပ်ခံရသူ တွေဟာလဲ စ နောက် ခံရတတ်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသဘောကို ဘယ်လို ဖော်ပြသလဲဆိုရင် April Fool’s day မှာ စကြ နောက်ကြတဲ့ စာရွက် လေးတွေရဲ့ နောက်ကျောဘက်မှာ ငါးငယ် ပုံလေးတွေ ဆွဲထည့် ပေးလိုက်တာပါပဲ။ (အခုခေတ်မှာတော့ ခင်မင်တဲ့ သူတွေကိုပဲ စကြ နောက်ကြတော့တာ များပါတယ်။)
အဲဒီလိုမျိုး နောက်ပြောင် ကျီစယ်မှုတွေက စပြီးတော့ ဧပြီလရဲ့ ပထမဆုံးနေ့မှာ အရူးလုပ်တာ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ဒီလို အလေ့အထဟာ ချက်ချင်းပဲ ပျံ့နှံ့သွားပြီး ၁၈ရာစုမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့ စကော့တလန် နိုင်ငံတွေမှာ စတင် ပြုလုပ် ခဲ့ကြတယ်။ ဒါ့အပြင် အင်္ဂလိပ်နဲ့ ပြင်သစ်တို့ရဲ့ လက်အောက်ခံ ကိုလိုနီနိုင်ငံ တွေကိုလဲ ပျံ့နှံ့ သွားခဲ့တယ်။ ဒီပျံ့နှံ့မှုမှ စတင်ပြီးတော့ အခြားသော နိုင်ငံတွေမှာ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှာ နောက်ပြောင် ကျီစယ်ပြီး စကြ နောက်ကြတဲ့ နေ့ရက်လေး ဖြစ်လာတဲ့ April Fool’s Day ဆိုပြီး ပေါ်ပေါက်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။။
(လူတိုင်းဟာ ပျော်ရွှင်စရာဆိုရင် နှစ်သက်ကြတယ်၊ စိတ်ကြည်နူးကြတယ် ဆိုတာ သိသာစေတဲ့ အချက် တစ်ချက်ကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိလိုက်တယ်လို့ မထင်ဘူးလားခင်ဗျာ….)
- ဒီနေရာလေးက စာပိုဒ်လေး တချို့ကို အလျဉ်းသင့်သလို ဘာသာ ပြန်လိုက်တာပါ... အဆင်အပြေဆုံး ဖြစ်အောင် တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစား ထားပါတယ်... -
နိုင်ငံရပ်ခြား ရောက်နေကြသော မြန်မာများအတွက် သတင်းကောင်း
Posted by မိုးသောက်(ရှမ်းလေး) at 11:55 am
သတင်းကောင်းလေး တစ်ခုပါ... ဘယ်နိုင်ငံကနေ မဆို မြန်မာနိုင်ငံကို ဖုန်းခေါ်လို့ရတဲ့ website လေးပါ...
ဖုန်းနံပါတ်လေးကို ရိုက်ထည့်ပြီး ခေါ်ရုံပါပဲ...
ဒီနေ့ပဲ ပြေးပြီး ဆက်လိုက်ကြရအောင်....
ဒီကို ဝင်လိုက်နော်... :P
Posted by မိုးသောက်(ရှမ်းလေး) at 11:44 pm
ဒီပို့စ်လေးကို ရေးဖြစ်သွားတာက သူငယ်ချင်း မိုးခါးလေး tag လိုက်လို့ပါ…. ပို့စ် ခေါင်းစဉ်လေးကို စမြင်မြင်ချင်း သဘောကျမိပါတယ်… ရေးချင်စိတ်နဲ့ ဘာရေးလိုက်မယ် ဆိုတာလဲ ဖြစ်လာတယ်… ဒါပေမယ့် မအားလို့ အခုမှ ရေးရတာပါ…. မအားဘူး ဆိုတာထက် ကွန်ပြူတာကို ကလိလိုက်လို့ အစအဆုံး ပြန်လုပ်နေရတာနဲ့ အခုမှ ပြန်ရေးနိုင်တာပါ… ကျွန်တော်နဲ့ ဘယ်သူတွေများ ဝါသနာတူမလဲ မသိဘူး… တူတဲ့သူ ရှိရင် ပြောနော…
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဝါသနာလေးများ အကြောင်းကတော့ ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး မရှိပါဘူး… ငယ်ငယ်က တော်တော် ချူချာခဲ့တယ်… အဲဒါကြောင့် အခုဆိုရင် အမြဲတမ်း ကျန်းမာနေအောင် အားကစား လိုက်စားတယ်… ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် ဝါသနာတွေကို ပြောရမယ်ဆိုရင် အားကစားကို နံပါတ်တစ် အနေနဲ့ ပြောရမှာပါ… အားကစားကတော့ အကုန်နီးပါး ကစားပါတယ်…. ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်ပေါ့… ဘောလုံးကန်၊ ရေကူး၊ ပင်ပေါင်ရိုက် (စားပွဲတင် တင်းနစ်)၊ Body Fitness နဲ့ တချို့ အားကစားနည်းတွေပါ ကစားဖြစ်တယ်… မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျောင်းတက်တုံးက ဘောလုံး နဲနဲပါးပါး ကန်ဖြစ်တယ်…. အဓိက ဆော့ဖြစ်တာတော့ ပင်ပေါင်ရိုက်တာပါပဲ… တော်တော် စွဲစွဲလမ်းလမ်းကို ဆော့ဖြစ်ခဲ့တာ… အခုထိလဲ ဆော့နေတုံးပါပဲ... ပင်ပေါင်ဘက် (Racket)ကို သွားလေရာမှာ ယူသွားတာ အခုထိပါပဲ… အခု အဆောင်မှာလဲ ပင်ပေါင်စားပွဲခုံ ရှိနေတော့ ကျွန်တော့် အကြိုက်ပေါ့ဗျာ… ညနေဘက်တွေမှာ ပင်ပေါင်ရိုက်တယ်… ပြီးတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား နဲနဲပါးပါး ဆော့ပေးတယ်… ရန်ကုန် ပြန်ရောက်ရင်တော့ ကုက္ကိုင်းမှာ ရေသွားကူးဖြစ်တယ်… အသင်း ဝင်ထားတော့ ရေကူးရတာ အဆင်ပြေတယ်လေ… အားကစားသာ ဝါသနာပါတာ ထူးထူးချွန်ချွန်တော့ မဖြစ်ပါဘူး…
နောက်ထပ် ဝါသနာတစ်ခုက နဲနဲဆန်းတယ်ဗျ… ဒီလို ဒီလို…. အလှမွေး ငါးလေးတွေကို မွေးရတာ… ကျွန်တော်ကလေ ငါးကန် ကြည်ကြည်လေးထဲမှာ ရေမှော်ပင်လေးတွေထည့်၊ ကျောက်စရစ်ခဲလေးတွေ၊ ခရုလေးတွေ၊ ဖန်ဂေါ်လီ လှလှလေးတွေ ထည့်ပြီး အလှဆင်၊ ပြီးတော့ အောက်ဆီဂျင်ပေးတဲ့ စက်ကလေးတပ်ပြီး ငါးလေးတွေ ကူးခတ်နေတာကို ကြည့်ရတာ အရမ်း စိတ်ချမ်းသာတယ်… ၁ဝတန်း ဖြေပြီးတော့ အိမ်မှာ ငါးမွေးတာကို အချိန် တော်တော် ပေးပြီး လုပ်ခဲ့တယ်… မွေးခဲ့တဲ့ ငါးတွေလဲ အများကြီးပဲ…. ရွှေငါး၊ အော်စကာ၊ ဒေါင်းငါး၊ Fighter, Lucky Fish, Tiger, Red Tail, Discuss စုံနေတာပါပဲ… မှတ်မိသလောက် ရေးလိုက်တာ… မမှတ်မိတာတွေ ရှိသေးတယ်… မှတ်မှတ်ရရ အိမ်မှာ ငါးမွေးကန် (၈)ကန်ှရှိတယ်…. အခုတော့ အဘိုးက ထားစရာနေရာ မရှိလို့ ရောင်းစားလိုက်ပြီတဲ့… :( အဲဒီအချိန်တုံးက ၁ဝတန်းအောင်ရင် ကွန်ပြူတာ သင်တန်းတို့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းတို့ ခေတ်စားလို့ လိုက်တက်ကြတာပေါ့… ကျွန်တော်လဲ ပါတယ်လေ… သင်တန်းမှာ သင်တာတွေကို စိတ်ဝင်စားတာ မဟုတ်ဘူး… သင်တန်းပြီးရင် အနီးအနားမှာရှိတဲ့ အလှငါးမွေးဆိုင်ကို ပြေးဖို့ပဲ စဉ်းစားနေတာ… ဟားဟား… ငါးမွေးတာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ် စာတမ်းတွေလဲ ရှာဖတ်တယ်… အခုထိ အိမ်မှာသိမ်းထားတုံးပဲ… Lucky Fish ဆိုတာကို ကြားဖူးကြမလား မသိဘူး… အဲဒီငါးက ဈေးကြီးတယ်လေ… ကျွန်တော် အရမ်းလိုချင်ခဲ့တာ… ဝယ်ဖို့လဲ မတတ်နိုင်ဘူး… အဲဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ အကောင်ပေါက်လေး ရောင်းတဲ့ ဆိုင်ကို လိုက်ရှာတာပေါ့… တွေ့တော့ ဈေးက ကျွန်တော် တတ်နိုင်တဲ့ဈေး… စုထားတဲ့ ပိုက်ဆံလေးတွေနဲ့ ဝယ်လိုက်တာ…. အကောင်လေးက လက်ညိုး လောက်ပဲရှိမယ်… ဈေးသွားတဲ့ အမေနဲ့ အဒေါ်တွေကို ငါးလေးကို ကျွေးဖို့ ပုဇွန်ဆိတ် သေးသေးလေးတွေ မှာရတာလဲ အမောပါပဲ… နောက်ပိုင်း အိမ်မှာ ကျွန်တော် မရှိတဲ့အခါ ငါးတွေကို အစာကျွေးဖို့ ကျွန်တော့် အဖေက တာဝန်ယူပေးပါတယ်… သူလဲ နဲနဲဝါသနာပါတယ်လေ… နောက်ပိုင်းမှာ Lucky Fish က တော်တော် အကောင်ကြီးလာတယ်… အစာကျွေးဖို့ ငါးကန်နား အဖေလာရင် ငါးက ပျော်နေတာပဲလို့ အမေကလဲ ပြောတယ်… ငါးမွေးရတာ တော်တော်လေးကို ကရိကထများပါတယ်.. ဒါပေမယ့်လဲ ငါးကန် ကြည်ကြည်လေးကို မြင်လိုက်ရရင် စိတ်ကို အေးချမ်းသွားတာပဲ… အဲဒါက ငါးမွေးတဲ့ ကျွန်တော့်ဝါသနာပေါ့...
နောက်တစ်ခုက စာဖတ်တာ…. တွေ့သမျှ စာအုပ် အကုန်ဖတ်တာပဲ… ငယ်ငယ်တုံးက ဦးလေး တစ်ယောက်က အလုပ် တာဝန်နဲ့ နယ်ပြောင်းရတော့ သူ့စာအုပ် သေတ္တာကြီးကို ကျွန်တော်တို့ အိမ်မှာ ထားခဲ့တာ… ဘယ်ပြော ကောင်းမလဲ… ကောင်းကောင်း မွှေတာပေါ့… အကုန် ဖတ်ပစ်လိုက်တယ်… နောက်ပိုင်းမှာလဲ စာအုပ်တွေကို တော်တော် များများ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်… အခုတော့ မြန်မာ စာအုပ်တွေ မရှိတဲ့နေရာ ရောက်နေရတယ်… ကွန်ပြူတာနဲ့ ဖတ်လို့က အဆင်မပြေဘူး… ကြာကြာဖတ်ရင် ခေါင်းမူးလာရော… အဲဒါကြောင့် စာဖတ်ချင်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ မြန်မြန် ပြန်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းနေတာ… (မဒီမိုးသောက်နဲ့ တွေ့ချင်တာလဲ ပါတာပေါ့… :P)
အခု ပြောပြတာတွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ အဓိက ဝါသနာတွေပါ… တခြား ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် လုပ်တာတွေ ရှိသေးတယ်… ဥပမာ- ကွန်ပြူတာတို့ ဘာတို့ပေါ့… တခြားတော့ ထူးထူးခြားခြား မရှိပါဘူး… ကျန်တာတွေကတော့ သာမာန်ပါပဲ… ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် ထင်တာ တစ်ခုတော့ ပြောပြမယ်နော်… ကိုယ် ဝါသနာ ပါတာကို လုပ်နေရရင် စိတ် ချမ်းသာတယ်ဗျ…. ဟုတ်ပါတယ်နော်… လက်ခံမလား မသိဘူး… အဟီး…
(အဓိက ဝါသနာကို မပြောလိုက်ရဘူး... မေ့တတ်ပုံကလေ.... သီချင်း နားထောင်ရတာကို အရမ်း ကြိုက်တယ်လို့ ပြောမယ်ဆိုပြီး ဘယ်လို ကျန်ခဲ့မှန်း မသိဘူး... သီချင်းဖွင့်ပြီး စာရိုက်နေတာတောင် မေ့ဖြစ်အောင် မေ့သွားသေးတယ်... :P သီချင်းလေး နားထောင် နေရတာကို ကြိုက်တာ... မြန်မာသီချင်းရော အင်္ဂလိပ် သီချင်းတွေပါ အားလုံး နားထောင်ဖြစ်တယ်... သီချင်း အမျိုးအစား တော်တော်များများကို ကြိုက်တယ်... အခု လောလောဆယ်မှာ သီချင်းလေးတွေနဲ့ ဆွေးနေတာပေါ့ဗျာ...)
ဒီပို့စ်လေးမြင်ရင် သူငယ်ချင်း မိုးခါးလေး ကျေနပ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်… ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ကျွန်တော့် ဝါသနာလေးတွေကို ပြောပြထားတာပါ…. :P
Labels: ခင်မင်မှုဖြင့် Tag ထားသော ပို့စ်လေးများ, အမှတ်တရများ...
Posted by မိုးသောက်(ရှမ်းလေး) at 9:47 pm
ဒီပို့စ်လေးဟာ ကျွန်တော့် Blog ရဲ့ (၅ဝ)ပြည့်ပို့စ်လေးပါ… ဒီလို (၅ဝ)ပြည့်မှာ မှတ်မှတ်ရရနဲ့ အကျိုးရှိတာလေး တင်မယ်လို့ စိတ်ကူးနေတုံး ကျွန်တော့် ချစ်သူဆီက စာရောက်လာပါတယ်… စာထဲမှာ ဓမ္မဒါန စာရွက်ပိုင်းလေး ပါလာပါတယ်… သူက ကျွန်တော့်ကို တတ်နိုင်သလောက် ဝေမျှ ပေးနိုင်အောင် အဲဒီ စာရွက်ပိုင်းလေးကို မိတ္တူ (၁ဝ)စောင် ကူးပေးလာတာပါ… စာထဲမှာ ပါလာတဲ့ ဓမ္မဒါန စာရွက်ပိုင်းလေးထဲမှာ ရေးထားတဲ့ “သစ္စာပြုဆုတောင်း” လေးကို ပြန်ကူးပြီး ညီအစ်ကို မောင်နှမ၊ သူငယ်ချင်းများကို ဝေမျှလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်…
- မြတ်စွာဘုရားသည် လောကသုံးပါး၌ လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ သတ္တဝါတို့၏ အကျိုးစီးပွား အလို့ငှာ ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါ၏…
- မြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်သည် လောကသုံးပါး၌ လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ သတ္တဝါတို့၏ ချမ်းသာခြင်း အကျိုးငှာ ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါ၏…
- မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်သာဝက သံဃာတော်သည် လောကသုံးပါး၌ လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ သတ္တဝါတို့၏ ကောင်းမှုပြုရန် အလို့ငှာ ပွင့်ထွန်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါ၏…
- ဤသို့ မှန်ကန်သော သစ္စာစကားကို ဆိုရသော အကျိုးအားကြောင့် ဘုရားတပည့်တော်၏ အခက်အခဲ မှန်သမျှ၊ အတိုက်အခံ မှန်သမျှ၊ အမှုအခင်း မှန်သမျှ အောင်မြင်ရ၍ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာဖြင့် စီးပွားဥစ္စာ တစ်နေ့တစ်ခြား တိုးတက်ရပါလို၏ အရှင်ဘုရား…
ဓမ္မဒါန - မိုးသောက်(ရှမ်းလေး) နှင့် မဒီမိုးသောက်
Posted by မိုးသောက်(ရှမ်းလေး) at 10:03 am
“ဖွားခမ်း… ဖွားခမ်းချက်တဲ့ဟင်းက…. ကောင်းလဲ မကောင်းဘူး…”
“သား… ဖိုးရှမ်း… သား ထမင်း စားတော့မလို့လား သား”
“သား… ဖွားခမ်း ပြောပြမယ်နော်… သေချာနားထောင် ဟုတ်ပြီလား…”
“ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက တောင်ယာလုပ်တဲ့ ရှမ်းသားအမိ နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူတို့ဟာ ဆင်းရဲကြရှာတယ်။ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရတာ။ နေ့တိုင်း သားဖြစ်သူက တောင်ယာသွား၊ အမေဖြစ်သူက ချက်ပြုတ် လျှော်ဖွတ် လုပ်စရာ ရှိတာတွေ လုပ်ရတယ်။ ပင်ပန်းတာပေါ့ သားရယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ သားဖြစ်သူက တောင်ယာက အပြန် အိမ်ရောက်တော့ အမေဖြစ်သူကို ပြောတယ်။ သူ ဝက်သားဟင်း တအား စားချင်နေတယ်တဲ့။ အဲဒါ အမေ ချက်ပေးပါဦးတဲ့။ မစားရတာလဲ ကြာပြီတဲ့။ အဲဒီတော့ အမေက စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ တောင်ပေါ်မှာ ဝက်ကသားက မရနိုင်ဘူးလေ။ ရွာထဲ သွားဝယ်မှ ဖြစ်မှာ။ သွားဖို့ကလဲ ဝေးနေတော့ ဝယ်ဖို့ကလဲ အဆင်မပြေဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အမေက သားကို ပြောလိုက်တယ်။ မနက်ဖြန် သား စားချင်တဲ့ ဝက်သားဟင်းထက် ကောင်းတာ စားရစေမယ်ပေါ့။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်သားတဲ့။ ဘာလဲဆိုတော့ အမေ့ကို ကတိ တစ်ခုတော့ ပေးရမယ်သားတဲ့။ အဲဒါက သား မနက်ဖြန်မှာ ဗိုက်တအားဆာမှ ထမင်းစားရမယ်။ သား ကတိ ပေးနိုင်လားတဲ့။ အဲဒါနဲ့ သားကလဲ ဝမ်းသာအားရနဲ့ ကတိပေးလိုက်တယ်။ သူ တအားဆာမှ စားမယ်ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ နောက်တစ်ရက်ကို ရောက်တဲ့အခါမှာ အမေက စောစောထ ချက်ပြုတ်ပြီး သားအတွက် ထမင်းထုပ် ပြင်ပေးတယ်။ သားဖြစ်သူ တောင်ယာ သွားခါနီးမှာ ထမင်းထုပ် လှမ်းပေးပြီး ကတိကို မမေ့ဖို့လဲ သေချာ မှာလိုက်တယ်လေ။ ဒီလိုနဲ့ သားဟာ တောင်ယာမှာ တမနက်လုံး အလုပ်လုပ်တာပေါ့။ နေမြင့်လာတော့ ဗိုက်ဆာလာတယ်။ သူ့အမေကို ပေးထားတဲ့ ကတိကြောင့် သူ ဖွင့်မစားသေးဘူး။ နေပိုမြင့်လာတော့ ပိုဆာလာပြီ။ ဒီအချိန်မှာလဲ သူ မစားသေးဘူး။ နောက်တော့ နေမွန်းတည့်လာပြီး တောင်ယာလုပ်တော့ ပင်ပန်းတာရယ်ကြောင့် ဗိုက်က တအားကို ဆာလာရော။ သူ အရမ်းကို ဆာနေပြီဆိုတာ သိလိုက်တယ်။ အဲဒါကြောင့် သူ့အမေကို ပေးထားတဲ့ ကတိအတိုင်း အခုအချိန်မှာ စားတော့မယ်လို့ တွေးပြီး ထမင်းထုပ်ကို ဖွင့်လိုက်တယ်။
ထမင်းထုပ်ထဲမှာ ပါလာတဲ့ဟင်းက ဝက်သားမဟုတ်ဘူး။ ခရမ်းသီးနှပ်နဲ့ ပဲပုတ်ထောင်း နှစ်မျိုးပဲ။ ဒါပေမယ့် သားက အဲဒီအချိန်မှာ တအားဆာနေပြီ။ ဝက်သားလဲ သူ သတိမရတော့ဘူး။ သူ့အမေ ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဟင်းနှစ်မျိုးနဲ့ ထမင်း စားလိုက်တာ အကုန်ပဲ။ တအား စားကောင်းတာပေါ့။ ခရမ်းသီး ချိုချိုနဲ့ ပဲပုတ်ထောင်း စပ်စပ်လေးက ခံတွင်း မြိန်စေတယ်လေ။ အဲဒီ ထမင်း တစ်နပ်က သူ့အတွက် တအားကို စားကောင်းခဲ့တာ။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သားက အမေကို ပြောတယ်။ အမေ ချက်ပေးလိုက်တဲ့ ဟင်းက စားကောင်း လိုက်တာဗျာပေါ့။ ဝက်သားဟင်းနဲ့တောင် မလဲနိုင်ဘူးတဲ့။
အမေက အဲဒီအခါမှာ သားကို ပြောရော။ သား… ဘယ်နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဟင်း ကောင်းကောင်း၊ မကောင်းကောင်း ဆာမှသာ စားလိုက်ပါသား၊ တအားကောင်းတဲ့ ထမင်း တစ်နပ်ဖြစ်လာရော သားရေ… တဲ့။”
“ကဲ… သား… ဖိုးရှမ်းလေး… ကြားတယ်နော်သား… အခု သား တအား မဆာသေးလို့ ဖြစ်မယ်… ခဏနေမှ စား။ ဟုတ်ပြီလား။”
“ဒါဆို သားကို ဝက်သားရော၊ ခရမ်းသီးရော၊ ပဲပုတ်ရော ချက်ထားပေးကြည့်ကြည့်…. ကျက်ရင် လာစားမယ်နော်…”
“ရော်… ဒီကလေးနှယ်… ငါစိတ်ညစ်တာရော….”
ငယ်စဉ်က မွေးမိခင်နှင့် မခြား ကျွေးမွေးပြုစု စောင့်ရှောက် သွန်သင်ပေးပြီး ကျွန်တော် ဆိုးသမျှ ခံခဲ့သော မေတ္တာကြီးမားလှတဲ့ ဖွားလေးများဖြစ်သော ဖွားခမ်း၊ ဖွားညွှန့်၊ (ဖွားမေ၊ ဖွားသိန်း) တို့ကို ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏။ ဒီပို့စ်လေး ရေးပြီး တတ်အားသမျှ ကျေးဇူးဆပ်ပါ၏။
(ကျွန်တော်တို့ ရှမ်းပြည် လေသံနဲ့ ပြောသလိုမျိုး ရေးထားပါတယ်… ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ တစ်နေကုန် ထိုင်ပြီး လှုပ်ရှားမှု နည်းတော့ စားမကောင်း ဖြစ်နေကြတဲ့ တချို့သော Blogger ကိုကို၊ မမများ၊ နေ့နဲ့ည မှားပြီး ဂိမ်း ဆော့ကြတဲ့ ကိုကိုများ၊ ဟင်းဂျီးများတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ တချို့သော သယ်ရင်းများ၊ အလုပ်ပင်ပန်းကြတဲ့ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အားလုံး ဆာမှ စားကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ… စားကောင်းပါလိမ့်မယ်… အဲ… အချိန်မှန်တော့ စားကြပေါ့နော်… စားကောင်းကြပါစေဗျာ…. :D)